मलम लगाउन भारतीय भुमी हुदै नेपाल – Rajmarg Online
मलम लगाउन भारतीय भुमी हुदै नेपाल
दाङ, चैत ११ । फागु पूर्णिमाको दिन । दाङको राजपुरस्थित बरुवानाकावासीहरु हर्षोलासका साथ होली खेल्दै थिए । बरुवानाकामा एक आपसमा रङ्ग र अविर लगाई होलीमा रमाउँदै थिए । गाउँका घर परिवार सबै होली खेल्न भनि वल्लो गाउँदेखि पल्लो गाउँ पुगेका थिए । गत बिहीबार दिउँसो तिन बजेको समयमा एक्कासि राजपुर गाउँपालिकाको वडानम्बर १ बरुवानाकास्थित बाबुराम सुनारको घरमा आगो लाग्यो ।
आगलागीबाट सबै लत्ता कपडा, अन्नबाली, घरमा रहेका सब थोक जलेर नष्ट भए । आगलागीबाट बाबुराम सुनारको परिवार मात्र पीडामा परेन सोही नाका निवासी लोकबहादुर सुनारको पनि घर जलेर खरानी हुन पुग्यो । घरमा रहेको मेरो नागरिता र बाहिर झुन्डाई राखेको सुकेको मकै मात्रै खरानी हुनबाट बचे ।
कसरी आगो लाग्यो ? आगो कहाँबाट सल्कियो ? कसैले पत्तै पाएनन् । स्थानीयहरुले माटो, झारपात र स्याउलाले आगो निभाउन प्रयास गरे तर, प्रयास सफल भएन ।
यस्तै लमही नगरपालिका वडानम्वर ५ निवासी शरद बुढाथोकी र राजपुर गाउँपालिका वडानम्वर ५ का वडाध्यक्ष नरेन्द्रसिंह भण्डारीले अग्नीपीडितहरुलाई सहयोग प्रदान गर्नु भएको छ ।
दाङको कोइलावास नाका हुँदै भाततिय भूमि हुँदै सोमबार अग्नीपीडितहरुकै निवासमा पुगी नगद दश हजार सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
बरुवानाकामा फागु पूर्णिमाको दिन आगलागी भएको राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ बरुवानाका निवासी हाल प्रवासमा रहनु भएका सन्देस धर्तीले आफ्नै गाउँका छिमेकीहरुको घर आगालागी भएको सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा फोटोहरु हालेको थाहा पाएपछि हामीले अग्नीपीडितहरु लाई सहयोग गर्ने सोच बनाएको नगर सहयोगीहरुले भन्नुभयो ।